Forex Broker Rebates - Best Forex ny EA | Expert Advisors | FX Robots
Cash Back Forex Broker Rebates - nahazo karama tamin'ny zavatra rehetra: Trade Hanao
Ve ianao fahazoana ny rebate isaky ny varotra ataonao?
Raha tsy izany, dia ianao manipy vola avy teo am-baravarankely.
Izany miasa toy izao:
Ny ankamaroan'ny mpikaroka forex trader dia mandany anao amin'ny alàlan'ny fanombohana ny fahasamihafana eo amin'ny tolotra ary mangataka ny vidiny (fantatra amin'ny hoe "spread"). Azonao atao ihany anefa ny manamaivana ny fielezany amin'ny fanangonam-bola ho an'ny varotra tsirairay ataonao. Eny tokoa, azonao atao ny mahazo an'ireto mpanarato ireto fanokafana kaonty forex amin'ny alalan'ny fampidirana mpampindram-bola (matetika antsoina amin'ny indostria ho "IB").
Ny IB dia manana fifanarahana amin'ny alàlan'ny broker forex hampiasana ny serivisy ho an'ny mpandraharaha ary hahazoana antoka ny mpanjifa amin'izany. Raha misy mpivarotra manokatra kaonty amin'ny alàlan'ny IB amin'ny alàlan'ny IB, dia manome vola marobe ho an'ny IB izany isaky ny vola azon'ny mpanjifany. Ny ankamaroan'ny IB dia mihazona ny vaomiera ho an'ny tenany ihany. Na izany aza, misy ny IBs sasany izay manome ampahany amin'ny vaomiera iverenany amin'ny mpanjifa amin'ny endrika fitsangatsanganana.
Cash Back Forex Broker dia mitaky tombontsoa
Ny ankamaroan'ireny fifandraisan'ny IB ireny dia manana fifandraisana amina mpivarotra tokana na mpivarotra vitsivitsy. Midika izany fa mety ho voafetra be ianao amin'ny fisafidianana broker. Ohatra, mety te-hanokatra kaonty amin'ny Broker A na Broker B ianao, fa raha tsy misy ifandraisany amin'ny iray amin'izy ireo ny fanomezana ny IB dia manome azy ireo ianao, tsy manam-pahasambarana fotsiny ianao.
Na izany aza, ny safidy ho rebate-manome IB, CashBackForex, Dia manana fifandraisana amin'ny mahery mpanakalo telo-polo. Ity ny lisitry ny mpanakalo ny forex ny rebates sy ny tsipiriany hafa:
Raha mieritreritra ny hanokafana kaonty forex ianao, dia azonao atao ihany koa ny manokatra iray amin'ny alalan'ny IB tahaka CashBackForex ary mandray rebates isam-bolana. Ny Niely dia hitoetra mitovy raha nanokatra kaonty mivantana amin'ny anankiray amin'ireo mpanakalo.
Amin'ny ankapobeny, ny fandresena-fandreseny toe-javatra ho anao sy ny IB.
Izao angamba ianao manontany hoe: Nahoana no tsy ny olona rehetra manao izany? Nahoana no misy olona hanokatra ny fitantarana mivantana amin'ny anankiray amin'ireo mpanakalo fa tsy mandalo rebate manome IB?
Valiny azo inoana: Ny ankamaroan'ny olona dia tsy mahafantatra momba izany. Satria tsy misy toe-javatra mitovy amin'ny indostrian'ny mpivarotra stock, mety handray anjara amin'ny tsy fahita amin'ny olon-tsotra tsy mahalala ny fisian'ny forex IB sy ny mety hisian'ny fihodinana.